‘छक्का पन्जा ३’ प्रदर्शनको दोश्रो दिन २ करोड क्लबमा ! – Mero Film
‘छक्का पन्जा ३’ प्रदर्शनको दोश्रो दिन २ करोड क्लबमा !
बुधवारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘छक्का पन्जा ३’ ले आफ्नो प्रदर्शनलाई बम्पर बनाएको छ । कमेडी जनरामा निर्माण भएको यस फिल्ममा दीपकराज गिरी, दीपिका प्रसाईं, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, बुद्धि तामाङ, संजोग कोइराला, शिवहरी पौडेल लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्मलाई दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेकी हुन् । प्रतिक्षित मानिएको यस फिल्मको बुकिङ हेर्दा पनि फिल्मले प्रदर्शनको दिन राम्रो ब्यापार गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो ।
अपेक्षा अनुसारै प्रदर्शन सुरु गरेको फिल्मले पहिलो दिन मोफसलमा कुल ५८ लाख बराबरको कलेक्सन गर्यो भने उपत्यका भित्र कुल ७५ लाख बराबरको कलेक्सन गर्न सफल भएको छ । अल नेपाल फिल्मले प्रदर्शनको दिन कुल १ करोड ३० लाख कलेक्सन गर्न सफल भएको छ ।
प्रदर्शनको दोश्रो दिन विहिवार रात्री शो छोडेर मोफसलमा फिल्मले ३० लाख बराबर कलेक्सन गरेको छ भने उपत्यका भित्रको कलेक्सन सार्वजनिक भएको छैन । उपत्यका भित्रको बुधवार हलमा देखिएको दर्शकको चापलाई मध्यनजर गर्ने हो भने फिल्म प्रदर्शनको दोश्रो दिन मै २ करोड क्लबमा पवेश गर्ने सम्भावना देखिएको छ । निर्माता दिपक राज गिरीले भने, ‘हिजो हलमा देखिएका दर्शकलाई सत् प्रतिशत मान्ने हो भने आज हलमा ७५ प्रतिशत दर्शकको उपस्थिति रहेको छ ।’
नोट : कलेक्सन रिपोर्ट वितरकले दिएको जानकारीमा आधारित रहेको छ ।
२०७५ असोज २५ गते १८:५० मा प्रकाशित
हलिउड सुपरस्टार ड्वेन जोनसनले ‘फास्ट एन्ड फ्यूरियस’ को नै सिरिजमा काम नगर्ने
‘बिग बोस’को होस्ट करन जोहर, सलमानले होस्ट नगर्ने
सलोनको ‘डाँडा बर पीपल’ छायांकन भदौबाट
भिडियोमा अभिनेत्री सुरक्षा पन्त
टिकटकमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको फोटो दुरुपयोग गरी चरित्र हत्या गर्ने पक्राउ
बुटिक उद्घाटनमा दीवाकर र दीपिका
श्रीमानको बचाउमा यस्तो बयान दिएकी छन् शिल्पाले